China Small Laser Cutter -500mmx500mm ụlọ ọrụ na ndị na -emepụta | Qingyuan
Obere laser cutter --- 500x500mm
Nha okpokoro 500x500mm
Ịcha isi Raytool (akpaaka akpaaka)
Ụdị igwe nhazi nkịtị ma ọ bụ nhazi dị elu nwere ike họrọ
A na -eji igwe ịkpụcha ọkụ laser nke ukwuu na nhazi nke nchara carbon, igwe anaghị agba nchara, alloy steel, galvanized sheet, aluminum sheet high speed cutting. A na -ejikarị ya maka etiti igwe iko na mkpụrụedemede mgbasa ozi/imepụta akara ngosi.
Fiber Laser Cutter mejupụtara jenerato laser, sistemụ njikwa, sistemụ ngagharị, sistemụ anya, sistemụ jụrụ oyi, sistemụ iwepụ anwụrụ ọkụ, ọ na-anabata moto servo ama ama na nnyefe na usoro ntuziaka nwere arụmọrụ dị mma iji nweta ezigbo mmegharị ngagharị na steeti nwere oke ọsọ.
Nhazi nkịtị ---- oke ọrụ nka
Bubata ma ọ bụ mee na China Nhọrọ
Egwuregwu bọọlụ, Taiwan
750W servo otu ọkwọ ụgbọ ala, Fuji, Japan
900W servo otu ọkwọ ụgbọ ala, Fuji, Japan
400W servo otu ọkwọ ụgbọ ala, Fuji, Japan
6mm maka carbon nchara
≤4mm maka igwe anaghị agba nchara
Cheeron Laser(QY Laser) a maara nke ọma dị ka onye kacha ibu na ọkachamara na 1530 1000w eriri laser ịkpụer ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ihe na China. Site na otu ndị ọrụ ọkachamara na ndị dị irè, anyị nwere ike ịnye gị 15301000w fiber laser cutting machine na ọnụ ala na ezigbo mma na ọrụ kacha mma.
Nke gara aga: Ọnụ ọnụ Laser cutter
Osote: Industrial Laser cutter 2500 × 12000 otu tebụl
Obere tebụl 500x500mm
Fiber Laser mpempe akwụkwọ Ịcha Machine
Laser Ịcha Machine
igwe ịcha laser maka ọla
1500watts obere tebụl metal eriri laser ọnwụ ...
Tebụl Mgbanwe igwe na -enweghị mkpuchi
Factory 3015 CNC Fiber Laser maka mpempe akwụkwọ Metal CS ...